लोकसेवामा मलाई प्रश्नः बिरामीले आई लभ यु भने के गर्नुहुन्छ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ लोकसेवामा मलाई प्रश्नः बिरामीले आई लभ यु भने के गर्नुहुन्छ?
लोकसेवामा मलाई प्रश्नः बिरामीले आई लभ यु भने के गर्नुहुन्छ?
पुलेसो १५ माघ, २०७७, बिहीबार ७:३३
‘ओइ, के भो ? किन रातो भएकी ? के के सोधे ?
पालो गन्तीमा मेरो नाम बोलाइयो। हुन त मलाई लोकसेवा पास गरेर सरकारी काम गर्ने कुनै इच्छा थिएन। यतिबेला जागिर भन्दा प्यारा मेरा साथीहरू लागिरहेको थियो। पास गर्ने साथीहरु सबै विभिन्न अस्पतालमा पोस्टिङ हुँदा, सधैंभरीलाई छुट्टिनु पर्छ भन्ने मात्र पीर थियो। एक किसिमले भन्नुपर्दा म अनुभव गर्न मात्र लोकसेवा आयोगमा लडिरहेकी थिएँ। मेरो स्थायी बसोबास नै धरान भएको हुँदा त्यहाँस्थित बिपि प्रतिस्ठान हस्पिटलमा दिएको स्थायी जागिरको परिक्षा नतिजा कुरिरहेकी थिएँ।
हल्का नर्भसनेस् त छँदैथियो। तैपनि निर्धक्क भएर परिक्षा कक्षभित्र छिरें। सरकारी अफिसभित्र सरकारी मान्छेहरु देख्दा अनौठो अनुभव गरें। ती चारै जना भद्र भलाद्मीले ज्याकेटमा ढाका टोपी ढल्काएको देख्दा निक्कै रोचक लाग्यो। एकजना ख्याउटे लाग्ने कलिलो उमेरका मान्छेले मलाई कुर्सी देखाउँदै बस्ने इशारा गरे। बाँकी तिन जना चाहिँ जुंगा पालेका र भुँडे देखिन्थे। मनमनै अन्दाज लगाएको थिएँ कि ख्याउटे व्यक्ति पक्कै पनि जिल्ला अस्पतालको चिकित्सक हुनुपर्छ। नभन्दै उनको परिचयबाट पत्ता लाग्यो।
‘तपाईं लोकसेवामा किन लड्न आउनु भएकोरु’
‘लिम्बु थरको हुनुहुँदो रहेछ, ताप्लेजुङ वा तेह्रथुममा पोस्टिङ परे काम गर्नुहुन्छ हुन्नरु’
‘नर्स आफैं बन्न चाहेको कि आमा बाले बनाउन चाहेका हुन्रु’
‘डाक्टर श्रीमान् पाए के जागिर हाप्नु हुन्छरु किनरु’
‘बिरामीको सेवा गर्दागर्दै उनले आई लभ यू भनेमा के गर्नुहुन्छरु’
यस्तै यस्तै बकम्फुसे प्रश्न आउने क्रममा अर्को जनस्वास्थ्य हाकिमले एउटा प्रश्न सोधे– ‘रजस्वला भएको बेला पुरुष र स्त्रीबीच संसर्ग भएमा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ?
यो प्रश्नपछि हामी माझ एकैछिन सन्नाटा छायो। म मिश्रित भावले बोल्न नसके जस्तो कालोनिलो भएँ। यतिबेला मैले ती चारै जना पुरुषलाई सम्पूर्ण रूपमा सग्लो लोग्ने मान्छे देखें। यस्तो लाग्यो, म अब यस्तो हिंस्रक घेराभित्र परें जहाँ चुपचाप बस्नु या रुनु बाहेक कुनै बिकल्प छैन। आफसे आफ स्वास एकदम फुलेर आयो अनि घाँटी ख्याप्प सुके जस्तो भयो। म मौन भएर ती चारै जनालाई नियालिरहेकी छु तर बोली पटक्क फुरेको छैन।
म मौन बसेको देखेर उनीहरुको मनोबल स्वतः बढ्ने पक्का थियो। जेसुकै भनुन् भनेर मैले त्यो हाकिमको आँखामा आँखा जुधाएर फिस्स हाँसें र उल्टो प्रश्न सोधें– ‘हजुरको बिहा भएको कति वर्ष भयो ?
‘बच्चाबच्ची कति छन्रु’
मैले आफुलाई केही नभएजस्तो गरी भन्न लागें– ‘उसो भए तपाईंका दुवै छोरीहरु श्रीमती रजस्वला भएकै बेला संसर्ग भएर जन्मेका हुन्रु कि पाँच वर्षसम्म ती छोरीहरुकी आमा महिनामा एक पटक रजस्वला हुन्छे भन्ने कुरा थाहा छैनरु मैलेभन्दा तपाईंको प्रश्नको सही र सटिक उत्तर तपाईंकै श्रीमतीले दिन सक्छिन्।’
फेरि कोठामा सन्नाटा छायो। मलाई औडाहा भएर आयो अनि जुरुक्क उठेर सोधें– ‘अरु प्रश्न पनि थियो कि म जाउँ हजुर ?
हाकिम साहेब गोजीमा हात राखेर म बाहिरिन्जेल अन्तै हेरिरहेको देखें। नेपाल खबर